CNC Machining Service, Steel loo shubay, Aluminum ridaya - Grand
Qaybo ka Automotive
Waa maxay sababta Dooro US
Shirkadda ayaa design caaryada, shubay dhinta iyo CNC workshops machining, takhasusay design, nidaaminta iyo wax soo saarka ah ee qaybo kala duwan oo bir aan caadiga ahayn iyo qaybo ka caadiga ah. badeecada ay ku lug beeraha kala duwan sida qaybo auto, maraakiibta, mashiinada, daaweynta caafimaad, taageero kaabayaasha, qalabka alaabta guriga, hardware qalab, iwm, oo waxaa intooda badan u iibin jireen inay Maraykanka, Japan, Italy, Kanada, Shiinaha iyo dalalka kale .
Ka dib ku dhawaad ​​toban sano ah raasamaal, aan lahayn waayo-aragnimo hodan ku ah wax soo saarka mishiino. Waxaan ku fiican yihiin ridaya Biraha cuntrooyinka sida copper, aluminium, iyo Alloys zinc, iyo awood u leeyihiin in ay wax soo saarka sax geedi socodka. Isla mar ahaantaana, shirkadda ayaa la aasaasay muddo-dheer iyo xiriirka iskaashi deggan iyadoo qaar ka mid ah foundries biraha ferrous iyo dhirta daaweyn dusha sida dahaadhay iyo Anodizing, si ay bixin karaan adeeg one-stop loogu talagalay macaamiisha.
Usheeda dhexe Ring Product Open Hab-Die Automatic H ...
High Quality kartoo Mini Cardan usheeda dhexe custo ...
Kartoo Tayada Sare Mini Cardan usheeda dhexe Waayo, A ...
OEM machining naxaas Aluminum ahama birta GE ...
Custom dhigay qaybo shubay copper la machining
Aluminum lowska silig hexagonal barbaro machining a ...
tuuboyinka Rakibidda Midowga toobinta , Black malleable Iron tuuboyinka habboona , TM tuuboyinka rakiban , Flat tuuboyinka habboona , 4 Way tuuboyinka habboona , Cadaadis High Y tuuboyinka Rakibidda Tee , All Products